Agaasimaha Guud Ee Wasaaradda Kalluumaysiga Oo Khudbad Ka Jeediyey Daabuurkii Uu Ardaynimadiisii Istaagi Jiray +SAWIRO Badan+Akhri Warka | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM Agaasimaha Guud Ee Wasaaradda Kalluumaysiga Oo Khudbad Ka Jeediyey Daabuurkii Uu Ardaynimadiisii Istaagi Jiray +SAWIRO Badan+Akhri Warka
September 20, 2016 - Written by admin
DAAWO VIDEO+SAWIRRO BADAN: Agaasimaha Guud Ee Wasaaradda Oo Saaka Booqday Dugsiga Sare ee M. A. Ali Iyo Nuxurka Khudbad Uu Daabuurka Uga Jeediyey Ardayda Hargeysa (Hubaal)- Agaasimaha Guud ee wasaaradda kalluumysiga iyo kheyraadka Badda Jamhuuriyadda Somaliland Dr. Fuaad Cabdisalaan Xasan ayaa subaxnimadii hore ee saaka booqasho ku tegey dugsiga sare ee Maxamuud Axmed Cali ee magaallada Hargeysa, isaga oo halkaasi khudbad dhiirigelin iyo wacyi gelin ah uga jeediyey ardayda.
Agaasimaha guud ee wasaaradda Kalluumaysiga oo ay booqashadiisa ku wehelinayeen masuuliyiin kala duwan oo uu kamid yahay Khadar Cabdi Cabdillaahi oo isagu ah Qoraaga buuga cusub ee GURRAC qoray, waxaa halkaasi ku soo dhaweeyey maamulka iyo masuuliyiinta dugsiga sare ee M. A. Ali oo uu horkacayo Maamulaha dugsigaasi Mr. Cali Axmed Balayax. Sidoo kale waxaa halkaasi ku sugnaa oo ardayda wax ka barata dugsiga oo waqtigaasi taagnayd daabuurka, kuwaas oo niyad-sami ku qaabilay Agaasimaha iyo weftigiisa. Maamule Cali Axmed Balayax oo hadallo kooban halkaasi ka jeediyey ayaa daabuurka ka sheegay in Agaasimaha guud iyo xubnaha kale ee weheliyaaba ay kamid yihiin shamacyadii siraadnaa ee dugsigan soo maray iyo midhihii uu soo saaray muddadii uu maamulaha ka ahaa dugsian. Maamule Balayax ayaa Agaasimaha iyo Qoraagaba ku tilmaamay iyo weliba xubnaha kale ee wehelinayayba in ay ahaayeen arday uu ku faanno isla markaana lay ardayda kale ee ay isku lodka yihiin ku majeeran jireen firfircooni, dadaal iyo habdhaqan togan. Maamule Cali Waxaa uu Ardayda ku baraarujiyey in waxbarashada iyo dedaalkoodu ku xidhan yihiin kamidho dhalinta hamiggooda iyo inay noqdaan hoggaamiyeyaasha berri.
“Saaka waxaa halkan innagu soo booqday agaasimaha wasaaradda kalluumaysiga Dr. Fu’aad Cabdisalaan Xasan, qaar kamid ah ardaydii dugsigan soo martay. Agaasimaha guud ee wasaaradda Kalluumaysiga iyo kheyraadka baddu waxaa uu ahaan jiray arday Iskuulkan ka baxay , waxaa kale oo iyaguna la socda Cabdiraxmaan Jaamac oo isna kamid ahaa ardaydii Iskuulkan soo martay laakiin markii dembe dugsiga sare ee Gacan Libaax u wareegay oo kabaxay, Maxamed Khadar Daahir Mooge oo Isna waqtigii ugu horreeyey ee Somaliland dugsiyada sare ka bilaabmeen soo maray dugsigan. Maxamed haatan waa siyaasi oo waxaa weeye musharrax doorashooyinka baarlamaanka ee soo socda. Waxaa kale oo isna innala jooga Khadar Cabdi Cabdillaahi oo isna kamid ahaa ardaydii Iskuulkan ka aflaxday. Haatan Maxamed Waa Qoraa, taasoo idin [isaga oo kor u haya nuqul kamid ah buuga GURRAC ee uu Khadar qoray] in ardaydii iskuulkan ka baxday ay qorayaal yeelatay, siyaasiyiin yeelatay oo ay madax kale yeelatay. Laakiin waxaa is weydiin leh horta ardaydani maxay ahaayeen markii ay wax baranayeen”. Sidaas ayuu yidhi maamule Cali Axmed Ballayax, waxaanu intaa ku daray isaga oo sii sharraxaya hadalkiisa “Ardaydani may ahayn kuwa marka wax la baranayo ee xiisadaha lagu jira warwareega fasalka dibadiisa, waxay ahaayeen rag halkii uu kursigu ka daalin lahaa iyagu kursiga daaliyey siday ugu fadhiyeen ee ay macalinkuun sidaas u eegayeen. Ardayga noocaas ah weeye ka u gudbaya marxaladaha noocan ah, waa ardayga soo kallahaya ee subaxa hore waannada macalinka dhegeysanaya.” Intaas kadib Maamuluhu waxaa uu daabuurka ku soo dhaweeyey Agaasime Fu’aan Cabdisalaan, si uu khudbad ugu jeediyo ardayda. Waxaanu yidhi Agaasimuhu oo uu hadalkiisa ku bilaabay ““Runtii saaka farxad bay ii tahay inaan idinkala soo qayb galo daabuurka iyo halkii iyo safkii aan soo istaagi jiray anigoo arday ah. Sidan saaka oo kale aad tihiin iyo safkan aad ku jirtaan baan subax walba u soo istaagi jirnay. Run ahaanna mararka qaarkood subaxyada ay noo yimaadaan niman madax ah oo iskuulkan soo maray, waxaanu is odhan jirnay malaha nimankani run idiin sheegi maayaan ee halkan ay gaadheen idinku ma gaadhi kartaan, laakiin hammi been ah buu kaasi ahaa noloshana meel walba waa la gaadhi karaa oo dadaal bay ku xidhan tahay. Run ahaanna dugsigani intii aanu ku jirnay iyo intii ka dembeysayba waxaa uu ka mid ahaa dugsiyada ugu horreeya iskuullada Somaliland oo ardaydii xilligayagu waxay u shin tirin jireen marka ay wasaaradda waxbarashadu ku dhawaaqayso natiijada imtixaanka shahaadiga ah, annagu marka la soo dhejiyo tobanka arday ee u sarreeya waxaanu filan jirnay in M. A. Ali uu kaalinta koowaad galo”. Sidaa ayuu yidhi Agaasimuhu. Waxaanu intaa ku daray oo uu ku dhirigeliyey ardayda talooyin la xidhiidha dedaalkooda.
Waxaa iyaguna halkaasi hadallo ka jeediyey Cabdiraxmaan Jaamac (Ilka-case), Qoraa Khadar Cabdi Cabdillaahi Iyo Musharrax Maxamed Khadar Daahir, oo dhammaantood ka warramay marxalado taariikhda u galay dugsigan oo ay soo mareen xilliyadii ay ardayda ahaayeen.
Dhinaca kale Khadar Cabdi Cabdillaahi oo kamid ahaa xubnaha weftigan ayaa Maamulaha Dugsiga sare ee M. A. Ali Md. Cali Balayax Guddoonsiiyey Xidhmo ay ku jireen nuqullada buugga GURRAC ee uu isagu qoray, kuwaas oo uu ugu deeqay Dugsigan si ay ardaydu u akhrisato waqtiyada ay Maktabada ama library-ga dugsigu leeyahay ku sugan yihiin.
Haddaba WAxanau halkan idiinku soo gudbinaynaa Muuqaalka farriintii ay xambaarsanayd khudbadda Agaasimaha guud iyo guud ahaanba jewigii booqashada.